Tsy misy vavolombelona? Tsy misy fanolanana izany, hoy ny Filan-kevitra Silamo any Pakistà · Global Voices teny Malagasy
Tsy misy vavolombelona? Tsy misy fanolanana izany, hoy ny Filan-kevitra Silamo any Pakistà
Voadika ny 14 Jona 2013 8:07 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Dansk, македонски, Svenska, Français, srpski, English
Nahazo tsikera betsaka avy tamin'ireo mahery fo any an-toerana ny fanapahankevitry ny Filan-kevitry ny Ideolojia Silamo (CII) izay nandà ny ADN ho porofo voalohany amin'ny tranga fanolanana. Manana ny mpanohana azy anefa io fanapahan-kevitra io, ny sasany faly fa misy fikambanana goavana ara-dalàna mandinika ireo olana ara-pivavahana any Pakistà. Tsy manana fahefana ara-dalàna ao amin'ny firenena ny Filan-kevitra, fa mpanolo-tsainan'ny governemanta Pakistaney sy ny Parlemanta mikasika ireo lalàna mifandraika amin'ny fivavahana Silamo. Ny fanolanana dia tsaraina araka ny zon'olom-pirenena any Pakistà, izay azo ampiasàna ny ADN ho porofo. Taorian'ilay fanapahan-kevitra, niara-nanaiky ny antenimiera Sindh ny 11 Jona 2012 fa tsy maintsy atao ny fitiliana ADN amin'ireo raharaha fanolanana rehetra any amin'ny faritany. Ilay didy mampiady hevitra [ur] izay navoaka ampahibemaso tao amin'ny tranonkalan'ny filan-kevitra, dia milaza fa nomena torolalana mazava ny Silamo momba ny fomba hitsarana sy hanasaziana ireo mpanolana, mifototra fotsiny amin'ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo vavolombelona efatra, ary ny ADN dia atao fotsiny ho fanampin'ny fijoroana vavolombelona voalohany. Ny Komisiona Miaro ny Zon'olombelona any Pakistà (HRCP), fikambanana goavana iray momba ny zon'olombelona any amin'ny firenena dia niantso ny fanambaran'ny mpitondra ho “mamindra miverina, tsy misy fieritreretana ary tsy rariny ho an'ireo iharan'ny fanolanana” ao amin'ny tranonkalany:
Ireo fanadihadiana tsy ampy sy ny fihemoran'ireo vavolombelona noho ny tahotra dia midika fa mitongilana mankany amin'ny mpanolana ny raharaha. Amin'ireo trangan-javatra ireo, hadalàna ny tsy fandraisana izay porofo rehetra misy, indrindra ny karazan-javatra tsy azo toherina toy ireo valin'ny fitiliana ADN.
Ireo niharan'ny fanolanana, miaraka amin'ny fianakaviany, manao fihetsiketsehana manohitra ireo voalaza ho tompon'andraikitra ary mangataka ny fanagadrana azy ireo. Hyderabad, Pakistà. sarin'i Rajput Yasir. Copyright DEmotix. 14 Novambra 2011
Any Pakistà, ny fanolanana dia tsaraina araka ny Sharia Silamo na ireo lalàna Hudood izay mampiady hevitra, izay raha ny tokony ho izy dia mitsara ny raharaha firaisana ivelan'ny fanambadiana miaro fanolanana – raha tsy mitondra lehilahy efatra ho vavolombelona nanatri-maso ny heloka ilay vehivavy dia mety ho voampanga ho nijangajanga izy. Raha ny marina, araka ny Komisiona Nasionaly mikasika ny Toe-piainan'ny Vehivavy, “80% ny vehivavy” nifonja tamin'ny taona 2003 dia nigadra noho ny “tsy fananany porofo tamin'ny fitoriana momban'ny fanolanana, ary dia voampanga ho nijangajanga”. Saingy ny taona 2006, nankatoavina ny Volavolan-dalàna mikasika ny Fiarovana ny Vehivavy izay nampihatra ireo lalànan'ny Hudood, mitondra ireo raharaha fanolanana araka ny lalàna sivily, izay manome alàlana ny fampiasana porofo ara-tsiantifika. Ayesha Tammy Haq (@tammyhaq), mpanao gazety Pakistaney iray, dia nandefa tsikera miaro esoeso tamin'ny kaontiny Twitter:
@tammyhaq: (Ayesha Tammy Haq) Ny tatinono nasiana sesika no halana ho an'ny devoly, hoy ny #CouncilofIslamicIdeology any Pakistana, soa ihany fa tsy manana olana goavana hovahana izy ireo
Mifanohitra amin'izany, nibitsika i Umair Rasheed (@umairrasheed1) hoe:
@Umairrasheed1 (Umair Rasheed): namory ny #Alam-e-IslamConference any #Peshawar i Mullahs. Miteny fa hanomboka hanao fihetsiketsehana ry zareo mba hampiharana ireo sosokevitry ny #CouncilofIslamicIdeology
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy “Let Us Build Pakistan” (Ndeha hanorina Pakistana) i Asif Zaidi
Na firy na firy ny porofo, tsy misy afaka mandà fa mety ho mandainga ny vehivavy iray raha milaza fa voaolana izy. Noho izany dia mila fikirizana be mba hanakanana ny fitsaràna haka fanapahan-kevitra mampiahiahy manohitra ireo lehilahy tsy meloka.
Nilaza i Muhammad Ilyas Haidri raha mitsikera mikasika ny lahatsoratra ao amin'ny Dawn.com niteny fa: Voamarina ihany ny fanapahan-kevitry ny CII tsy hanaiky avy hatrany ny valim-pitiliana ADN… Marina fa tsy azo antoka ny valim-pitiliana avy amin'ireo laboratoara tsy manara-penitra toy ny any Pakistà sy ireo hafa maro any amin'ny firenena mahantra, izay hanjakàn'ny kolikoly, ny hosoka, ny fandisoana valim-pitiliana, ary ny rafi-pitsaràna tsy azo atokisana. Niteny tao amin'io tranonkala io ihany i Rana Gulabi:
Misy tsoa-kevitra siantifika ao ambadik'io satria ny ADN dia azo alaina avy amin'ireo fiaovana fampiasa andavanandro tahaka ny fihogo, fitafiana, sns, amin'ny alalan'ireo fitaovana mahazatra avy amin'ny laboratoara, ary azo apetraka n'aiza n'aiza mba hamitahana ireo mpiasa ara-pahasalamana amin'ny tatitra izay ataony. Sahy manao izany ny vehivavy iray te-hamaly faty ny vadiny taloha, mba handravana ny fiainan'ilay lehilahy.
Sady nanitrikitrika ny fisian'ny lehilahy pretra mihoatra ny 24 ao amin'ny CII ny HWG no nanasongadina fomba fijery iray tao amin'ny fanehoan-keviny:
Tokony nandinika manokana ny momba ireo vehivavy mpikambana aloha ny CII. Ahoana no hahafahan'ny fikambanana iray izay ahitàna lehilahy amin'ny ankamaroany, mandray fanapahan-kevitra mahakasika ny vehivavy nefa tsy mihaino ireo mpisolo tena izany akory?
Nitatitra ny tenin'i M. Tahir Ashrafi, manam-pahaizana silamo malaza, ilay mpitoraka bilaogy Tazeen Javed :
Azo heverina – fara-fahatsarany – ho porofo araka ny toe-draharaha ny ADN ka ahafahana ifotoroana rehefa manao fisamborana sy na mandalina ny famotorana. Na izany aza, tsy tokony hosaziana noho ny profon'ny ADN irery fotsiny ny olona voaendrikendrika iray, satria ilaina ireo porofo avy amin'ireo lehilahy efatra silamo.
Teo amin'io bilaogy io ihany, nitsikera i Tazeen Javed :
Raha mpanao lalàna aho, dia hitaky ny hanaovana lalàna izay mametraka ny sazy henjana ho an'ireo lehilahy efatra ireo, lazaina fa mpino silamo kanefa nanatri-maso mangina izany asa ratsy fanolanana izany.
1 herinandro izayEtazonia
2 herinandro izayAfrika Mainty
Ireo tantara sangany tato amin'ny Global Voices niresahana ny fahamaroam-piainana, raha eo am-pankalazàna ny Andro Erantany ho an'ny Tontolo Iainana izao ny planeta
Nanome fanampiana sy nivavaka i Pakistan amin'ny ady mafy amin'ny COVID-19 atrehin'i India